Wararka - Hordhaca gabion net
Shabakada Gabion waxaa loo isticmaali karaa taageerada jiirada, taageerada godka aasaaska, shabaqa la taaban karo ee buufin ee dusha sare, dhirta cagaaran (cagaaran), tareenka iyo xayndaabka go'doominta jidadka waaweyn, sidoo kale waxaa laga dhigi karaa baqashada iyo dermooyin saafiya oo loogu talagalay kahortagga baaritaanka wabiyada, biyo xireennada iyo badda, iyo sidoo kale baqashada loo xiri jiray kaydadka iyo webiyada. Musiibada ugu halista badan ee wabiyada waa burburka wabiyada jiinkiisa biyaha, taasoo keenta fatahaado, sababay qasaaro aad u weyn oo naf iyo maalba leh iyo nabaad guur ciid ah Sidaa darteed, marka la xallinayo dhibaatooyinka kor ku xusan, adeegsiga shabaqyada gabion waxay noqotay mid ka mid ah xalka ugu fiican, kaasoo si joogto ah u ilaalin kara sariirta webiga iyo bangiga.
1. Qaab dhismeedka jilicsan ayaa la jaanqaadi kara isbeddelada foorashada iyadoon waxyeello soo gaarin, wuxuuna ka ammaan iyo xasillooni fiican yahay qaab dhismeedka adag;
2. Awood adag oo ka-hortag ah, waxay u adkeysan kartaa xawaaraha socodka biyaha ugu badan ee 6m / s;
3. Qaab-dhismeedku asal ahaan waa biyo la marin karaa oo wuxuu leeyahay dulqaad xoog leh oo ku aaddan saamaynta dabiiciga iyo shaandhaynta ee biyaha dhulka hoostiisa. Cunnooyinka adag ee la hakiyay iyo silliga biyaha ku jira waxaa lagu ridi karaa dhagaxa weyn, kaas oo ku habboon koritaanka dhirta dabiiciga ah isla markaana si tartiib tartiib ah dib ugu soo celiya deegaankii asalka ahaa ee deegaanka.
Shabakada gabion waxaa loo sameeyay qaab silig bir ah ama mesh silig polymer ah, kaas oo hagaajin kara dhagaxa booska saxda ah. Qafiska siliggu waa qaab dhismeed ka samaysan silig xarig leh ama la marsiiyey. Labadan qaab dhismeed ayaa elektaroonik lagu samayn karaa, sanduuqa siligga ee tidcan ayaa intaa dheer lagu dahaadhi karaa PVC. Isticmaalka dhagaxa adag ee cimilada u adkaysta inuu buuxiyo, si dhakhso ah uma jabi doono sababtoo ah xirashada iyo jeexitaanka saxanka sanduuqa dhagaxa ama gabion. Gabdhaha leh noocyada kala duwan ee dhagaxyada baloogyadu waxay leeyihiin astaamo kala duwan. Dhagxyada laba geesoodleyaasha ah si wanaagsan ayaa la isugu dhafan karaa, qafiska dhagaxa ah ee laga buuxiyayna si fudud uma beddelmi karo.
In injineernimada muuqaalka, ilaalinta jidadka waaweyn, ilaalinta biyo xireenka iyo soo celinta buuraha dhaadheer ayaa had iyo jeer madax xanuun u ahaa injineerada iyo farsamayaqaannada. Sanado badan, waxay sahaminayeen hab dhaqaale iyo hab ku habboon oo aan buuxin karin oo keliya shuruudaha buuraha xasilloon iyo ilaalinta xeebta, laakiin sidoo kale ku guuleysta saameynta cagaarka deegaanka. Si tartiib tartiib ah, tiknoolajiyadaani waxay u bilaabatay inay soo muuqato, waa tikniyoolajiyadda dalabka ee shabakadaha gabion ecological.
Waxyaabaha saafiga ah ee loo yaqaan 'Gabion net net' waa kuwo kala duwan, oo inta badan loo adeegsado ilaalinta jiirada iyo darbiyada xajinta, ka hortagga buundada, ilaalinta wabiga, waddada weyn ee laga ilaaliyo jidadka, ilaalinta jiirada dhinaceeda, kor u qaadista bannaanka deegaanka ee deegaanka
Waqtiga boostada: Aug-08-2020